Delta, inotevera emulator kubva kumusiki weGBA4iOS, inopinda beta chikamu | IPhone nhau
Delta, inotevera emulator kubva kumusiki weGBA4iOS, inopinda beta
Musi waNovember 23 tinotaura newe de Delta, iyo inotevera emulator kubva kumusiki weGBA4iOS iyo, kusvika patinogona kufungidzira yavo webhusaitiIchave inowirirana neyechinyakare Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance uye Game Boy Rudzi rwekunyaradza. Kusvika parizvino taiziva kuti yako yekutanga Beta yaizosvika uyu Zvita uye zvinoita sekunge nguva iyoyo yatosvika, kana kuti atovepo kare tinogona kuzadza diki remibvunzo yekunyorera kuyedza iyi emulator iyo ichavhurwa zviri pamutemo muna 2017.
Riley Testut, musimudziri weDelta, anotibvumidza kuyedza mabetas eayo anotevera emulator munzira mbiri: imwe ichave iyo beta yatinogona kunzi "zvakajairika". Iyo imwe beta ichave chimwe chinhu chakanyanya kukosha uye iyo ichagamuchira zvimwe zvinogadziridzwa, izvo pakutanga zvinoreva kuti ichave isina kugadzikana, asi zvakare kuti ichagadzirisa zviputi nekukurumidza kupfuura zvakajairwa beta. Iko kune ino beta kune yekudhinda iyo yatinogona kuwana nekuzadza iro remibvunzo inowanika pa IZVI ZVINONZI. Mubvunzo remibvunzo isu tichapindura mibvunzo kubva pane chishandiso chatinofanira nei tichida kuedza iyi beta yemamuli. Tichakwanisa kukumbira iyo "Press" vhezheni kusvika 23:59 pm neChishanu, Zvita 16.
Delta emulator ichaburitswa zviri pamutemo kare muna 2017
Zvinondishamisa zvishoma nezve izvo zvinodiwa kuti uyedze iyo Press vhezheni yeDelta betas ndeyekuti pakati pavo pane uve neApple ID yekushandisa shanduro dzakapihwa kuburikidza neTestFlight. TestFlight iApple application kubva patinogona kuisa ekuyedza shanduro dzese application iyo mabhatas atakanyorera, chimwe chinhu chandiri kuita izvozvi neiyo ViewRanger app yatakaona mune yakakosha iyo Apple Watch Series 2 yakaratidzwa. yekumisikidza nzira inoshamisa nekuti tiri kutaura nezve emulator, ini ndakanganisa kwazvo kana isu tichafanira kuiisa neimwe nzira. Chimwe chinodikanwa chinobvunzwa neanogadzira ndechekuti isu tine yakaisa iOS 10 kana gare gare.
Parizvino pane kusahadzika kwakawanda, asi chinhu chimwe chiri pachena: isu munguva pfupi tichava nemamulator akawanda anowanikwa kupfuura GBA4iOS. Iwe unoda kuzviedza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Delta, inotevera emulator kubva kumusiki weGBA4iOS, inopinda beta
Kamerar ZOOM Lens Kit inovandudza iyo iPhone 7 Plus kamera kune avo vanokumbira zvishoma zvishoma
Apple inotangisa mhinduro kuburikidza neICloud kudzivirira isingadiwe kokero dzekarenda